ငွေတစ်ထောင်လောက်နဲ့ကျောက်ကပ်ဆေးရအောင် …ရှဲထားကြပါနော် - VPS - MCKZONE
ကျောက်ကပ်ဆေးရအောင်နှစ်တွေကြာအောင် ကျောက်ကပ်ဟာ သွေးကို ဆား အဆိပ်နဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားစစ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေ ဆားတွေ ကျောက်ကပ်မှာ စုပုံလာတော့ ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လိုပြီင်္ပေါ့။
ဒါ့အပြင် ရောဂါတစ်မျိုးမျိုး ( အသည်းရောဂါ ) ရှိနေရင်လည်း ကျောက်ကပ်ဟာပိုပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ခုခေတ်မှာ သုံးရတဲ့ဆေးတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ဓါတုဓါတ်ကြွင်းတွေ အသားငါးက အာဆင်းနစ်တွေဟာ သင့်ကျောက်ကပ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ???
အရွက်စားမုန်လာပင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နံနံပင်(တရုတ်နံနံ) တစ်စည်းကိုယူရေနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေး
အသေးလေးတွေဖြတ် ဆူနေတဲ့ရေထဲ ၁၀ မိနစ်ပြုတ် ဖန်ခွက်ထဲစစ်ထည့် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်အအေးခံ။နေ့စဉ် တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပေးရင် စုပုံနေတဲ့အဆိပ်တွေ ဆီးထဲပါသွားပြီပေါ့။
နံနံပင်ဟာ ကျောက်ကပ်ကုသဆေးအဖြစ် အများသိတဲ့ သဘာဝအပင်တစ်ခုပါဘဲ။ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Credit to MTHN( UNIM )
ငှတေဈထောငျလောကျနဲ့ ကြောကျကပျဆေးရအောငျ …ရှဲထားကွပါနျော
ကြောကျကပျဆေးရအောငျနှဈတှကွောအောငျ ကြောကျကပျဟာ သှေးကို ဆား အဆိပျနဲ့မလိုလားအပျတဲ့ခန်ဓာကိုယျထဲဝငျလာတဲ့အရာတှကေိုဖယျရှားစဈထုတျပေးခဲ့ရတယျ။ဒီအခြိနျမှာ မလိုလားအပျတဲ့အရာတှေ ဆားတှေ ကြောကျကပျမှာ စုပုံလာတော့ ဆေးကွောသနျ့စငျဖို့လိုပွီင်္ပေါ့။
ဒါ့အပွငျ ရောဂါတဈမြိုးမြိုး ( အသညျးရောဂါ ) ရှိနရေငျလညျး ကြောကျကပျဟာပိုပကျြစီးလှယျပါတယျ။ခုခတျေမှာ သုံးရတဲ့ဆေးတှေ ဟငျးသီးဟငျးရှကျက ဓါတုဓါတျကွှငျးတှေ အသားငါးက အာဆငျးနဈတှဟော သငျ့ကြောကျကပျကိုခွိမျးခွောကျနပေါတယျ။ဒါကိုဘယျလိုလုပျကွမလဲ???
အရှကျစားမုနျလာပငျတဈမြိုးဖွဈတဲ့ နံနံပငျ(တရုတျနံနံ) တဈစညျးကိုယူရနေဲ့သနျ့စငျအောငျဆေး
အသေးလေးတှဖွေတျ ဆူနတေဲ့ရထေဲ ၁၀ မိနဈပွုတျ ဖနျခှကျထဲစဈထညျ့ ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့အအေးခံ။နစေ့ဉျ တဈဖနျခှကျသောကျပေးရငျ စုပုံနတေဲ့အဆိပျတှေ ဆီးထဲပါသှားပွီပေါ့။
နံနံပငျဟာ ကြောကျကပျကုသဆေးအဖွဈ အမြားသိတဲ့ သဘာဝအပငျတဈခုပါဘဲ။ကနျြးမာပြျောရှငျနိုငျကွပါစေ။
Categories:	HEALTH	/ by MC KZONE January 13, 2020
နေ့စဉ်အချိန်မှန် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း...
တိုင်းရင်းဆေးနှင့် အမျိုးသားရောဂါ အချို့...